Usoro na Ọnọdụ - Tuesday Match - 50% dakọtara ruo £ 50 |
Usoro na Ọnọdụ – Tuesday Match - 50% dakọtara ruo £ 50
Nke a bonus ga-abụ n'etiti 2nd – 8nke February 2017 GMT.
Naanị Uru na Loss (P&L) on họrọ oghere egwuregwu, Superman, The Batman, Ikpe ziri ezi League na The Green Marina Die n'etiti 00:00 & 23:59 (GMT) n'ụbọchị nke nkwalite ga ịgụ kwupụta nzere maka agbam ume.
The agbam ume ga-ọdịda dị ka net uru (ezigbo ego winnings) on họrọ ohere mpere. Ke edinam na gị net P&L ka nweworo a nke kacha nta nke £ 10 na winnings, ị ga-enweta a agbam ume gbakọọ na 50% gị oké njọ P&L.
Iji ruo eruo maka Win agbam ume, Player doro a kacha nta nkwụnye ego nke £ 10 na n'ụbọchị nke nkwalite na wagered on Superman, The Batman, Ikpe ziri ezi League na The Green Marina Die.
Oke ngụkọta mmeri agbam ume ego bụ £ 50 na bonus ego.
Standard bonus wagering chọrọ nke 30x daashi ego itinye tupu bonuses ma ọ bụ ihe ọ bụla capped winnings nwere ike napụrụ.
Daashi ego akwụ site na nke a
nkwalite, naanị ike ga-eji na-egwu na anyị na oghere egwuregwu.
General Usoro na ọnọdụ apply.Management mkpebi bụ ihe ikpeazụ N'ọnọdụ nile.